''ချစ်သူနှစ်ဦးကြား အနမ်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ.'' - SANTHITSA
Category : Knowledge, Life Style
ချစ်သူတွေကြားမှာ နမ်းခြင်းဟာ မထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဆိုတာ လူတိုင်း သိကြပါတယ်။သို့သော် အနမ်းနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းကိုတော့ သိကောင်းမှသိမှာမို့ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သုတေသန ပြုရာမှာ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ ဒေါက်တာဝီလျံစတိုင်းဘတ်ရဲ့ လေ့လာချက် တစ်ချို့ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မြတ်မြတ်နိုးနိုး နမ်းတာဟာ ကျန်းမာရေးအတွက်
ကောင်းမွန်တဲ့ အချက်ဟာ ၇ ချက်ရှိပြီး ဆိုးကျိုးဟာ ၄ မျိုးရှိပါတယ်တဲ့။
၁…ချစ်သူတို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ မိန်းမရော ယောက်ျားပါ နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်က ကြွက်သားမျှင်တွေကို လှူပ်ရှားလာအောင် ဦးနှောက်က လှူံဆော်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ သွေးလွတ်ကြောတွေ စီးဆင်းမှူ ပိုမိုအားကောင်းလာစေပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကိုလည်း သန့်စင်စေပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၂…. နမ်းတဲ့အခါ ငါးစက္ကန့်ကြာမျှ နမ်းတိုင်းမှာ ကိုယ်တွင်း သိုလှောင်ထားတဲ့ အဆီပမာဏကို ၁၂ ကယ်လိုရီ လျော့နည်းစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၃….နမ်းနေစဉ်အချိန်မှာ ချစ်သူနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ သွေးကြောများမှ သွေးတို့ ပြန့်ကားသွားပြီး သွေးခုန်နှူန်း မြန်လာစေတဲ့အတွက် သွေးကြောထဲမှာ ပိတ်နေတဲ့ အဆီတွေ ကြေပျက်သွားပြီး သွေးတွင်း ကိုလက်စထရော ပမာဏကို ကျဆင်းစေပါတယ်။
၄……နမ်းခြင်းကြောင့် မိမိစိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှူတွေ အားငယ်မှူတွေ စိတ်ဓာတ်အင်အား ကျဆင်းခြင်းဖြစ်အောင် လှူံ့ဆော်ပေးတဲ့ ဟိုမုန်းဓာတ်ကို ဦးနှောက်တွင်းမှ ထုတ်လုပ်ပေးခြင်းကို ဟန့်တားး စေနိုင်ပါတယ်။ ချစ်သူရဲ့အနမ်းဟာ အကောင်းဆုံး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုထုံးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သုတေသီများက တစ်ညီတစ်ညွတ်ထဲ ဆိုထားပါတယ်။
၅……ချစ်သူနဲ့နမ်းနေတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်အရည်အသွေး မြင့်မားခြင်း အခြေအနေကို ရောက်ရှိနေတာမို့ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးတွေကိုလည်း အမြင့်မားဆုံး အခြေအနကို ရောက်ရှိစေပါတယ်။
၆…..ဆေးပညာအရ လူတွေမှာရှိနေတဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူကြပါ။ သို့သော် ချစ်သူနှစ်ဦး အနမ်း ဖလှယ်ကြတဲ့အခါမှာ တစ်ဦးချင်းဆီမှာရှိနေတဲ့ ကိုယ်ခံပဋိဇီဝစွမ်းအားတွေဟာ တံတွေးကနေတစ်ဆင့် ပေါင်းစပ်ရောက်ရှိပြီး ပိုမိုစွမ်းအားတွေ ရရှိသွားစေနိုင်တာဟာ ရာခိုင်နှူန်း ၈၀ အထိ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၇….နောက်ဆုံး တစ်ချက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကို နမ်းရတာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ ကောင်းသလိုရင်ခုန်နွေးထွေးမှူ ကိုလည်းခံစား ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကဲကောင်းခြင်းရဲ့ အကျိုးကိုသိပြီးရင် ဆိုးခြင်းကိုလည်း လေ့လာကြည့်ကြပါစို့….
လူတစ်ယောက်နဲ့ လူတစ်ယောက် နမ်းခြင်းကြောင့် တစ်ယောက်ထံမှ တစ်ယောက်ထံသို့ ရောဂါပိုးများ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက် ကူးစက် စေနိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
၁…..တုတ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ နမ်းခြင်းကနေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
၂….မိမိနဲ့ နှူတ်ခမ်းချင်း နမ်းရှူံ့လိုက်သူရဲ့ နှူတ်ခမ်းမှာ ကြွက်နို့ကဲ့သို့ အနာများရှိနေပါက ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
၃….ရေယုန် ဗိုင်းရပ်ကလည်း နမ်းခြင်းမှ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
၄……အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးကလည်း တံတွေးကနေ တစ်ဆင့် ကူးစက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်အချိန်မှာနမ်းပြီး ဘယ်အချိန်မှာ မနမ်းသင့်လည်း ဆိုတာကိုသိပြီမို့ ချစ်သူတွေကြားမှာ နမ်းခြင်း အားဖြင့် ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ….
”ခဈြသူနှဈဦးကွား အနမျးအကွောငျး သိကောငျးစရာ”
ခဈြသူတှကွေားမှာ နမျးခွငျးဟာ မထူးဆနျးတဲ့ ကိစ်စတဈခုဆိုတာ လူတိုငျး သိကွပါတယျ။သို့သျော အနမျးနဲ့ ပါတျသကျပွီး ကောငျးခွငျး ဆိုးခွငျးကိုတော့ သိကောငျးမှသိမှာမို့ အခဈြနဲ့ပတျသကျပွီး သုတသေန ပွုရာမှာ ကမ်ဘာကြျောတဲ့ ဒေါကျတာဝီလြံစတိုငျးဘတျရဲ့ လလေ့ာခကျြ တဈခြို့ကို ပွောပွခငျြပါတယျ။ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ မွတျမွတျနိုးနိုး နမျးတာဟာ ကနျြးမာရေးအတှကျ
ကောငျးမှနျတဲ့ အခကျြဟာ ၇ ခကျြရှိပွီး ဆိုးကြိုးဟာ ၄ မြိုးရှိပါတယျတဲ့။
၁…ခဈြသူတို့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ နမျးနတေဲ့အခြိနျမှာ မိနျးမရော ယောကျြားပါ နှဈဦးစလုံးရဲ့ မကျြနှာပွငျပျေါက ကွှကျသားမြှငျတှကေို လှူပျရှားလာအောငျ ဦးနှောကျက လှူံဆျောပေးလိုကျတဲ့အတှကျ မကျြနှာပွငျပျေါမှာရှိတဲ့ သှေးလှတျကွောတှေ စီးဆငျးမှူ ပိုမိုအားကောငျးလာစပေါတယျ။ မကျြနှာပွငျပျေါက အညဈအကွေးတှကေိုလညျး သနျ့စငျစပေါတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
၂…. နမျးတဲ့အခါ ငါးစက်ကနျ့ကွာမြှ နမျးတိုငျးမှာ ကိုယျတှငျး သိုလှောငျထားတဲ့ အဆီပမာဏကို ၁၂ ကယျလိုရီ လြော့နညျးစတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
၃….နမျးနစေဉျအခြိနျမှာ ခဈြသူနှဈယောကျစလုံးရဲ့ သှေးကွောမြားမှ သှေးတို့ ပွနျ့ကားသှားပွီး သှေးခုနျနှူနျး မွနျလာစတေဲ့အတှကျ သှေးကွောထဲမှာ ပိတျနတေဲ့ အဆီတှေ ကွပေကျြသှားပွီး သှေးတှငျး ကိုလကျစထရော ပမာဏကို ကဆြငျးစပေါတယျ။
၄……နမျးခွငျးကွောငျ့ မိမိစိတျထဲမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ စိတျဖိစီးမှူတှေ အားငယျမှူတှေ စိတျဓာတျအငျအား ကဆြငျးခွငျးဖွဈအောငျ လှူံ့ဆျောပေးတဲ့ ဟိုမုနျးဓာတျကို ဦးနှောကျတှငျးမှ ထုတျလုပျပေးခွငျးကို ဟနျ့တားး စနေိုငျပါတယျ။ ခဈြသူရဲ့အနမျးဟာ အကောငျးဆုံး စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ကုထုံးတဈခုဖွဈကွောငျး သုတသေီမြားက တဈညီတဈညှတျထဲ ဆိုထားပါတယျ။
၅……ခဈြသူနဲ့နမျးနတေဲ့ အခိုကျအတနျ့မှာ လူတဈယောကျရဲ့ ဦးနှောကျအရညျအသှေး မွငျ့မားခွငျး အခွအေနကေို ရောကျရှိနတောမို့ ကိုယျရညျ ကိုယျသှေးတှကေိုလညျး အမွငျ့မားဆုံး အခွအေနကို ရောကျရှိစပေါတယျ။
၆…..ဆေးပညာအရ လူတှမှောရှိနတေဲ့ ကိုယျခံစှမျးအားတှဟော တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျမတူကွပါ။ သို့သျော ခဈြသူနှဈဦး အနမျး ဖလှယျကွတဲ့အခါမှာ တဈဦးခငျြးဆီမှာရှိနတေဲ့ ကိုယျခံပဋိဇီဝစှမျးအားတှဟော တံတှေးကနတေဈဆငျ့ ပေါငျးစပျရောကျရှိပွီး ပိုမိုစှမျးအားတှေ ရရှိသှားစနေိုငျတာဟာ ရာခိုငျနှူနျး ၈၀ အထိ ရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
၇….နောကျဆုံး တဈခကျြကတော့ ကိုယျ့ရဲ့ခဈြသူကို နမျးရတာ ပြျောရှငျကွညျနူးစရာ ကောငျးသလိုရငျခုနျနှေးထှေးမှူ ကိုလညျးခံစား ရရှိနိုငျပါတယျ။ ကဲကောငျးခွငျးရဲ့ အကြိုးကိုသိပွီးရငျ ဆိုးခွငျးကိုလညျး လလေ့ာကွညျ့ကွပါစို့….
လူတဈယောကျနဲ့ လူတဈယောကျ နမျးခွငျးကွောငျ့ တဈယောကျထံမှ တဈယောကျထံသို့ ရောဂါပိုးမြား အလှယျတကူ ဝငျရောကျ ကူးစကျ စနေိုငျပါတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။
၁…..တုတျကှေးရောဂါ ဖွဈစတေဲ့ဗိုငျးရပျဈဟာ နမျးခွငျးကနေ ကူးစကျနိုငျပါတယျ။
၂….မိမိနဲ့ နှူတျခမျးခငျြး နမျးရှူံ့လိုကျသူရဲ့ နှူတျခမျးမှာ ကွှကျနို့ကဲ့သို့ အနာမြားရှိနပေါက ကူးစကျနိုငျပါတယျ။
၃….ရယေုနျ ဗိုငျးရပျကလညျး နမျးခွငျးမှ ကူးစကျနိုငျပါတယျ။
၄……အသညျးရောငျအသားဝါ ဘီပိုးကလညျး တံတှေးကနေ တဈဆငျ့ ကူးစကျစနေိုငျပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ ဘယျအခြိနျမှာနမျးပွီး ဘယျအခြိနျမှာ မနမျးသငျ့လညျး ဆိုတာကိုသိပွီမို့ ခဈြသူတှကွေားမှာ နမျးခွငျး အားဖွငျ့ ကနျြးမာ ပြျောရှငျနိုငျကွပါစေ….